MaSouth America ekufambisa anononoka zvichitevera kuoma kweArgentina chikwereti
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » MaSouth America ekufambisa anononoka zvichitevera kuoma kweArgentina chikwereti
Argentina Breaking Nhau • Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Vagari vemuArgentina vanodzokera mukuda kwavo kwekufamba sezvakaratidzwa mukubhuka kwendege kwemwedzi mina yekupedzisira yegore chete 4% pamberi pegore rapfuura.
Mukufamba kwedambudziko rechikwereti muArgentina, kufamba mukati meSouth America kunoratidzika kunge kuri kudzikira, sezvo maArginia achidzora chishuwo chavo chekufamba.
Mumwedzi misere yekutanga yegore ra2018, vanosvika nendege dzekunze muSouth America vaive 6% kumusoro kwemwedzi misere yekutanga ya2017, sezvakataurwa nekutsvagisa kwakaitwa naForwardKeys, iyo inoongorora anopfuura mamirioni gumi nemanomwe emabhizimusi ekubhuka kwendege pazuva. Nekudaro, kubhururuka kwendege kwemwedzi mina yekupedzisira yegore parizvino ingori 17% pamberi pezvavaive panguva imwechete mu1.
Parizvino mabhezari epasi rese erwendo rwekuenda kuBrazil, kuSouth America kwakanyanya kuenda, panguva yaGunyana - Zvita, parizvino vari 8% pamberi pezvavaive panguva ino muna 2017, zvinonzwika zvichikurudzira, asi izvo zvinopesana nenguva ye12% kukura vekunze vashanyi vanosvika kwegore kusvika kupera kwaNyamavhuvhu. Kana tichienzanisa, Colombia, Peru neChile vese vanoita kunge vari kutambura, pamwe nekukwikwidza kwendege kwese kwese kuchimhanya kumashure kwadzaive panguva imwechete gore rapfuura.
Chinhu chikuru chave chiri kufamba kwekubuda kubva kuArgentina, uko kwakadonha zvichitevera kudhiza kwepeso yekuArgentina. Kufamba kuenda kuBrazil kwakange kuri 31% kubva muna Ndira kusvika Kubvumbi, asi peso yakarova yakaderera musi wa3 Chivabvu yakaparadza musika unobuda kwemwedzi mitatu inotevera. Kubva musi wa31 Nyamavhuvhu, marezinesi ekuArgentina ekubhururuka kuenda kuBrazil muna Chivabvu kusvika Zvita ari 1% pasi achienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura
Kufamba kubva kuArgentina kuenda kuChile kwakatamburawo zvakashata. Pakutanga kwegore, Jan-Apr, vanosvika vaive 2% kumusoro panguva imwechete mu2017. Zvisinei, ikozvino kubhuka kwemwedzi mina yekupedzisira yegore kuri 52% kumashure. Uku kudonha mune imwe yemisika yakakosha yeChile kwakashandura 9% yakanaka kuita mumwedzi mina yekutanga ya2018 kusvika 9% isina kunaka kwemwedzi mina yekupedzisira ye2018.
Argentina-parutivi, tarisiro yemusika mukuru weSouth America, Brazil, inokurudzira. Kuburitswa kwazvino kwemwedzi mina yekupedzisira yegore kubva kumamwe makuru makuru emisika ari pamberi, mamwe zvinonakidza, seChile (+ 28%), France (+ 15%) neSpain (+ 15%). Iwo anonyanya kushamisa muzana anosimudza anobva ku: Bolivia (+ 41%) South Africa (+ 36%), Canada (+ 26%), Japan (+ 23%), Paraguay (+ 19%) neColombia (+ 15%).
Kuverengwa kwazvino kwaGunyana kusvika Zvita, kubva pamisika yakakosha-refu yekutangira kuenda kuSouth America kazhinji iri pamberi pa2017. Ivo vanobva kuCanada vari pamberi pe12%, kubva kuGerman 9% kumberi, kubva kuFrance neJapan 8% kumberi uye kubva ku UK 7% kumberi. Maonero kubva kune aya mashanu emisika misika ari kunyanya kukurudzira kuArgentina, Brazil, Colombia, neEcuador.
Olivier Jager, CEO, ForwardKeys, akati: "Dambudziko reArgentina chikwereti chakaita chinzvimbo chakasimba mukufamba kwemaSouth America. Nekupunzika kwekukosha kwepeso, zvakabva zvangodhura zvakanyanya kuti maArgentina vafambe kuenda kunze kwenyika uye nzvimbo dzemuno dzakadai Chile neBrazil dzakatambura kuderera kukuru kune vashanyi vanobva kuArgentina. Zvisinei, panguva imwecheteyo, Argentina, uye nekuwedzera South America, yakava inokwezva kumisika yepasi asi ine mutengo wakakwira wekutakura kwenguva refu. ”